; १६ बर्षपछि किन बन्यो 'दर्पण छायाँ' को भाग २ ? - reelnepal
१६ बर्षपछि किन बन्यो 'दर्पण छायाँ' को भाग २ ?
मनिष अन्जान । तपाईले 'दर्पण छायाँ' चलचित्र हेर्नुभएको छ भने त्यो चलचित्र आजभन्दा १६ बर्ष अगाडी निर्माण भएको हो । जुन चलचित्रले १६ बर्ष अगाडी सबैको दिल चोरेको थियो आजपनि 'दर्पण छायाँ' हेर्ने दर्शकहरु उतिक्कै भावुक हुन्छन् । 'दर्पण छायाँ' ले जसरी १६ बर्ष अगाडी सबैलाई भावुक बनाएको थियो अब त्यसको 'भाग २' निर्माण हुने भएको छ । तुलसी घिमिरेले निर्देशन गरेको चलचित्र 'दर्पण छायाँ' मा दीलिप रायमाझी, उत्तम प्रधान, निरुता सिंहको प्रमुख भुमिका रहेको थियो । दर्शकहरुले अत्याधिक रुचाइयो चलचित्र 'दर्पण छायाँ' लिएर १६ बर्षपछि तुलसी घिमिरेले चलचित्र निर्देशन गर्दैछन् । 'दर्पण छायाँ' चलचित्र सफल भएपछि तुलसी घिमिरेले दर्जनौ सफल चलचित्रहरु दर्शकमाझ पस्किए तर १६ बर्ष अगाडी निर्माण भएको चलचित्र 'दर्पण छायाँ' कै सिक्वेल बनाउने निर्देशक घिमिरेले प्रयास गरेका छन् जुन तारिफ योग्य भने छ । 'दर्पण छायाँ २' को सोमबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बिच निर्देशक घिमिरेले शुभ मुहूर्त पनि गरे । बिहिबारबाट छायाँकन सुरु गर्ने तयारीमा रहेका निर्देशक घिमिरेले यस चलचित्रमा सबै नयाँ कलाकारहरु दोहोर्याएका छन् ।
दीलिप रायमाझी, उत्तम प्रधान, निरुता सिंहको व्यस्तताका कारण 'दर्पण छायाँ २' मा उनीहरुलाई दोहोर्याउन नसकेको निर्देशक घिमिरेले कार्यक्रममा जानकारी दिए । 'दर्पण छायाँ' बनाउदा भारतबाट प्राविधिक ल्याएर निर्देशक तुलसी घिमिरेले नेपालमा चलचित्र तयार गरेका थिए । तर अहिले नेपालमा नै प्राविधिक देखी सम्पुर्ण चलचित्रको कार्य हुने गर्छ । 'प्रविधिले १६ बर्षमा धेरै फड्को मारिसकेछ', निर्देशक घिमिरेले कार्यक्रममा भने -'दर्पण छायाँ' बनाउदा हामीलाई निकै गाह्रो थियो । नेपालमा प्राविधिक पाइँदैन थियो हामीले भारतबाट मगाउनु पर्थ्यो । तर अहिले त्यो अबस्था छैन् । नेपालमा पनि बलीउड सरहका प्रविधिहरु भित्रिसकेका छन् ।' उनले कार्यक्रममा अगाडी बोल्दै भने -'हामीले 'दर्पण छायाँ'मा पुरानै कलाकारहरु दोहोर्याउने प्रयास गरेका थियौ तर सफल भएनौ । सबै कलाकारहरुको व्यस्तताका कारण दर्पण छायाँका कलाकारहरुलाई मैले 'दर्पण छायाँ २' मा दोहोर्याउन सकिन् । १६ बर्ष अगाडी तयार भएको चलचित्र 'दर्पण छायाँ'को कथा र 'दर्पण छायाँ २' को कथा भने विल्कुलै फरक छ त्यसैले पनि हामीले नयाँ कलाकारहरु छनोट गरेका छौ ।'
उनका अनुसार नयाँ कलाकारहरुले पुरानो कलाकारको अभाब खड्कन भने दिनेछैनन् । '१६ बर्षपछि दर्पण छायाँको सिक्वेल बनाउने प्रयत्न चाहिँ किन गर्नुभयो ?' भन्ने हाम्रो प्रश्नमा निर्देशक घिमिरे भन्छन्, 'समयले धेरै फड्को मारिसकेको छ । जसरी १६ बर्ष अगाडी चलचित्र 'दर्पण छायाँ'लाई दर्शकहरुले अत्याधिक रुचाउनु भएको थियो त्यसैले मलाई लाग्यो यसको दोस्रो भाग पनि बन्नु पर्छ ।' 'चलचित्रले दर्शकलाई मनोरञ्जनसँगै सन्देश पनि दिनु पर्छ त्यसैले १६ बर्ष अगाडी दर्पण छायाँले जसरी दर्शकहरुको मनमा राज गरेको थियो त्यो क्रेज फेरी 'दर्पण छायाँ २' ले फर्काउनेछ', निर्देशक घिमिरेले भने -'धेरै दर्शकहरुले मलाई भेट्दा पटक पटक भन्नु भएको थियो 'दर्पण छायाँ'को अर्को भाग पनि बनाउनु पर्छ भनेर त्यसैले पनि मैले यो प्रयास गरेको हुँ ।' चलचित्र 'दर्पण छायाँ २' सिक्वेल भने होइन । 'दर्पण छायाँ'को कथा र 'दर्पण छायाँ २' को कथा विल्कुलै फरक छ', उनले भने । चलचित्रमा तिन कलाकारहरुको मुख्य भुमिका रहनेछ । चलचित्रमा मोडल पुष्प खड्काका साथमा २ नयाँ नायिका सहारा कार्की र श्रद्धा प्रसाइको मुख्य भूमिका हुनेछ । त्यस्तै यो चलचित्रमा सरोज खनाल, वीएस राना, शेर वहादुर, सुमन घिमिरे, जीवन आचार्य, अशिम शेर्पा, फिरोज तिमिल्सिनाको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ ।
TAGS : Tulsi Ghimire ,